के हो दम तथा एलर्जी यस बाट कसरी सुरक्षि हुने ? « ABC NEWS NEPAL | No.1 News channel of Nepal
के हो दम तथा एलर्जी यस बाट कसरी सुरक्षि हुने ?
दम अर्थात् अस्थमा श्वासप्रश्वाससंग सम्बन्धित रोग हो । वातावरणीय प्रदुषण, धुवाँ धुलो, चिसो तथा फूल फूल्ने मौसममा फूलको परागको कणबाट हुने विभिन्न एलर्जीका कारण जुनसुकै उमेर समूहका मानिसलाई दम अर्थात् आस्थमा हुन सक्दछ । यदि कसैलाई एलर्जी छ र त्यो लामो समयसम्म रहृयो भने मानिसलाई आस्थमा हुने गर्दछ ।
दम रोगमा श्वास प्रश्वासका कोषिकाहरुले एक प्रकारको इन्जाइम उत्पादन गर्दछन् जसले फोक्सोको मांसपेशीहरुलाई खुम्च्याई श्वास प्रश्वास नलीमा व्यवधान उत्पन्न गराउँछ र मानिसलाई सास फेर्नमा अप्ठेरो महसुस भई खोकी लाग्ने, स्वाँ, स्वाँ हुने, छाती गह्रौ हुने लगायतका लक्षण हुने गर्दछन् । विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार विश्वका करीब २५ करोड मानिस दम को समस्याले पिडित छन् । दम रोगका कारण हजारौं ले वर्षेनी ज्यान गुमाउनु परेको अवस्था छ ।
मृत्यु हुने मा ८० प्रतिशत जति नेपाल जस्ता कम विकसित तथा विकासोन्मुख मुलुकका नागरिक पर्ने गर्दछन् । यो रोग जुनसुकै उमेर समूहका मानिसलाई पनि हुन सक्छ । दम रोगले बालबालीकाहरुलाई पनि सताउन सक्छ । बढि मात्रामा चिसो मौसममा सताउने यो रोगले मौसम परिवर्तन हुने समयमा पनि सताउने गर्दछ । बालालीकामा देखिने धेरै समस्या स्वास प्रस्वास नै हो । अहिले हाम्रो देशमा बाल मृत्युदर बढाएको प्रमुख रोगहरु मध्ये स्वासप्रश्वास पनि एक प्रमुख कारक तत्व भएको ग्रान्डी अन्र्तराष्ट्रिय अस्पतालका दम तथा एलर्जी रोग विशेषज्ञ डा सञ्जयराज थापाको भनाइछ ।
उहाकानुसार दम हुने कारणहरुमा यदि परिवारमा कसैलाई दम को बिमारी छ भने पनि दम रोग हुन सक्छ । एक्जेमा, राइनाइटिस जस्ता एलर्जिक रोगहरु छन् भने, धूलो धूवाँको कारण र धूमपान गर्ने व्यक्तिलाई, प्रदूषित वातावरणका कारण हुन सक्छ ।
बालबालीकामा दम हुँदा सास फेर्दा छातीबाट घ्यार–घ्यार आवाज आउने गर्छ ।
शुरुशुरुमा यस्तो लक्षण हप्ता वा अझै लामो अन्तरालमा एक पटक हुने गर्छ । तर, रोग जटिल हुँदै गएको खण्डमा दिनहुँ जस्तो समस्या आइपर्छ । दमका बिरामीलाई सामान्य रुघाखोकी भएको बेला वा भाइरल इन्फेक्सन भएको अवस्थामा पनि दम जटिल बन्दै जाने हुन्छ । यसबाट बच्न एलर्जी बढाउने तत्वबाट टाढा रहनु पर्छ । धूलो र धूवाँ बाट आफू बच्ने बालबालीकालाई बचाउने, गलैंचा, खेलौनाआदिको धूलो सँग जोगिने, चिसो हावा, फ्रीजको चिसो खानेकुरा तथा पिउने कुरा नखाने, स्वस्थकर खानपानमा ध्यान दिन चिकित्सकको सुझाव छ ।